Isikhathi Iposi: Jan-20-2021
Uma kukhulunywa ngemizamo yokusiza kanye nemicimbi, ama-marathoni aphakathi kwezinketho ezinhle kakhulu laphaya. I-marathon ivumela abagijimi ukuthi babonise amandla abo, amandla abo nokuzinikela kwabo esizeni sabo noma abaxhasi abazikhethelayo ngemikhiqizo ye-marathon yangokwezifiso. Akukho lutho qu ...Funda kabanzi »
Yini i-Sun Protection Clothing? Yini Ukwelashwa kwe-UPF?
Uma ungumuntu osebenzayo osebhishi lolwandle, i-surfer noma ingane yamanzi, kungenzeka ukuthi ukhale ngokuthi kufanele uqoqe esikrinini selanga njalo lapho ujika. Ngemuva kwakho konke, kunconywa ukuthi ufake kabusha isikrini selanga njalo emahoreni amabili noma ngaphezulu - ikakhulukazi uma ususa ithawula, swimmi ...Funda kabanzi »
Yini indwangu ye-triblend? Kungani ithandwa kakhulu?
Kungani ihembe le-triblend lishisa kamnandi? Lapho iklayenti lami lifuna ukwelulekwa ngokukhetha impahla yokwenza ihembe elijwayelekile, ngiyaqiniseka ukuthi ngincoma lokho. Ukube ubungangibuza ukuthi kungani, bengizokutshela ukuthi i-triblend tee yinto ethambile kunazo zonke owake wayithinta. Njengoba kungenzeka uqagele f ...Funda kabanzi »